Naphcon-A - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Naphcon-A
Generic Name: Naphcon-A Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Naphcon-A ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Naphcon-A ကိုဓါတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိဝေဒနာတွေကို ကုသရာမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးကို သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအတိအကျ လိုက်နာအသုံးပြုပါ။ သင့်ကိုပေးထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသေသေချာချာလေ့လာဖတ်ရှုပြီးညွှန်ကြားချက်အားလုံးကို တသဝေမတိမ်း လိုက်နာပါ။
မျက်ကပ်မှန်ချွတ်ပါ။ မျက်စဉ်းခပ်ပြီးမျက်ကပ်မှန်ပြန်လည်တပ်ဆင်လို့ ရမရသင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။ မျက်လုံးကျိန်းစပ်နေရင် သို့မဟုတ် ပိုးဝင်နေရင် ပြန်မတပ်ပါနဲ့။
ဆေးပုလင်းထိပ်ဝကို မျက်လုံး၊ မျက်ခွံ၊ အရေပြား စတာတွေအပါအဝင် အခြားဘာနဲ့မှ မထိတွေ့ပါစေနဲ့။
မျက်လုံးထဲဆေးရည် ကောင်းစွာစိမ့်ဝင်သွားအောင် မျက်စိမှိတ်ထားပြီးမျက်လုံးအတွင်းဘက်ထောင့်ကိုတစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ်ခန့် လက်နဲ့အသာအယာဖိပေးပါ။
ဆေးရည်အရောင်ပြောင်းနေရင်၊ အရောင်နောက်နေရင်၊ ဆေးပုလင်းယိုစိမ့်နေရင်၊ အမှုန်အမွှားတွေ ရှိနေရင် ဆက်လက်အသုံးမပြုပါနဲ့။
Naphcon-Aကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Naphcon-A ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Naphcon-Aဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Naphcon-Aကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Naphcon-A အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန် – အကယ်၍သင်ဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဆေးကိုမဆို ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲမသုံးသင့်ပါဘူး။
Naphcon-Aသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
သင့်ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ သွားဆရာဝန် စတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူအားလုံးကိုသင်ဒီဆေးအသုံးပြုနေကြောင်းအသိပေးထားပါ။
ဆေးအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အခြေအနေကိုယ် မသိရသေးသရွေ့ အမြင်အာရုံကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တာဝန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမပြုလုပ်မိပါစေနဲ့။
ဒီဆေးဝါးကို သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ အချိန်ကာလဒါမှမဟုတ် အသုံးပြုပုံအညွှန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ အချိန်ကာလထက်ကျော်လွန်ပြီးစွဲမသုံးပါနဲ့။ ဒီလိုစွဲသုံးခြင်းအားဖြင့် မျက်စိပိုမိုနီရဲလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးကို မျိုချမိရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အတွက် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် သောက်လိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့ အရေးပေါ်ဌာနကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ဆေးအသုံးပြုနေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိလာခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။ ဆေးကြောင့်ရလာနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အကယ်၍သင်ဟာ နို့တိုက်မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဆေးကြောင့် သင့်ကလေးငယ်မှာ အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ဒီဆေးဝါးကို ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်မရှိဘဲအသက် ၆နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Naphcon-A ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Naphcon-A ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Naphcon-A အသုံးပြုပြီးအောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆေးရုံဆေးခန်းရှိရာသို့ ချက်ချင်းသွားရောက်ပြသပါ။
ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုလက္ခဏာများ – ခန္ဓါကိုယ်တွင် အဖုအပိမ့်အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အရေပြားနီရဲခြင်း၊ ယောင်ယမ်းခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ အဖျားရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိဘဲဖြစ်စေအရေခွံကွာခြင်း၊ အသက်ရှူသံရွှီရွှီမြည်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းထဲတစ်ဆို့နေခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ စကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ခြင်း၊ အသံသြခြင်း၊ ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း၊ မျက်နှာ စသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်း
အမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ မျက်စိဆိုးဆိုးရွားရွားကျိန်းစပ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Naphcon-A နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Naphcon-A ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Naphcon-A နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Naphcon-Aက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Naphcon-A နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Naphcon-Aဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Naphcon-A ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Naphcon-A ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Naphcon-Aကိုအသုံးပြုဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးအသုံးပြုပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်မျက်စဉ်းဆေးခပ်ရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲခပ်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးခပ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။